7 Akanaka Nhata Misika MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 7 Akanaka Nhata Misika MuEurope
Tora chitima kuenda kunzvimbo kwayo kuputsa kweguta kana kunotenga, misoro mikuru inoshamisa kwazvo muEurope inazvo zvese. Misika yematare iri uko kunodzokororwa uye kwazvino, ikozvino uye nhoroondo, uyai pamwe chete, panoonekwa zvinhu zvikuru, uye yedu 7 misika yemhando yepamusoro muEurope ndiwo muenzaniso wakanaka.
Kana iwe uchishuva nezvekutenga, uye kunyanya kune vintage akaunganidzwa, zvadaro izvi 7 misika yemhando yepamusoro muEurope chichava chiroto chinoitika. Ingo tevera edu ekupedzisira misika muEurope gwara, uye tora a sutukezi hombe!
1. Munich Nhata Musika
Kana iwe uri kuenda kuBavaria kune iyo Mazororo eEurope muchirimo, uye kutsvaga zvimwe zvitsva zvevintage pfuma, ipapo iwe uchada musika mukuru weMichigan. Uyu musika unotyisa unotaridza mutambo wechitubu uye unoitwa kamwe chete pagore.
Pachave nepamusoro 2000 vatengesi, ine zvinoshamisa mazambiringa zviri, kunge bhegi raLouis Vuitton pamitengo inosetsa. saka, iwe unofanirwa kunge uchijekesa iwo Mugovera weiyo Riesen-Flohmarkt Theresienwiese misika yematare muMunich. Pamusoro pe, uya nerakajeka rwekutenga, uye uvepo nekukurumidza sezvaunogona. Masuo anovhurika 4 ndiri, uye hauzove uri wega shiri yekutanga!
2. Amsterdam flea musika
Kana iwe waisaziva, Amsterdam iguta rine nhoroondo yekutengeserana. saka, hazvishamisi kuti imwe yemisika yemhando yepamusoro muEurope iri muAmsterdam. Kamwe pagore, migwagwa inoyevedza muAmsterdam, shanduka uve musika wepachena, kwaunogona kutenga uye nekunyorovesa inoshamisa mamiriro mune imwe ye maguta makuru muEurope.
Kamwe pagore, semhemberero paZuva raMambo, migero uye nzira dzeAmsterdam zvinoshanduka kuita musika mukuru we flea. Chic vintage, unyanzvi, gadgets, uye zvimwe zvechipiri-ruoko hupfumi zvichakumirira iwe pane ino inotyisa flea musika.
apo? 6 ndiri 8 pm musi waApril 27.
3. Iyo Grande Braderie De Lille
Musika mukuru uye unonyanya kuzivikanwa muFrance, iyo Grande Braderie de Lille misika yemisika ichave ichigamuchira 10,000 vatengesi.
Musika weLille flea ndicho chiitiko chikuru chegore uye chinoitika mukupera kwevhiki kwekutanga kwaGunyana. Kana iwe uri muvintage, uye zvinhu zvekare, wobva waita zviri nani kunyorera tikiti kuenda kuLille munaGunyana 4fung– 5fung, yevavha extravaganza.
Zvinonzi, izvo zvinokutora iwe padyo ne 40 maawa kungofamba nemasitendi ese, uye izvo ndisingaregi uye kutenga.
Mashoma mashoma anobatsira kuchengeta & dzidza:
“Ndeupi mutengo wako wakanaka?”- Ndeupi mutengo wako wakanaka?
"Coupons la poire en Deux" - Ngatisanganei pakati / rova ​​chibvumirano
Sei ikoko? Tora awa TGV chitima rwendo kubva kuParis.
4. Portobello Road Musika MuLondon
Musika wakakora kwazvo muEngland unoitika mazuva ese mumusika wePortobello muLondon. Fashoni, zvekare, chikafu, uye yechipiri-ruoko pfuma ichave yakakumirira iwe mazuva ese evhiki, asi gadzirira kusimudzira kwesimba uye ruvara neMugovera.
saka, mushure mezuva rekare rezvitoro, unogona kubata zvinonaka veggies, chizi, uye kumwe kurapa kwekukurumidza kwemasikati usati waenderera mberi nekutsvaga kwako kwemazambiringa pamusika wefashoni kuWestway. Kushanyira Portobello Road musika ndechimwe chezvakanakisa zvinhu zvekuita muLondon, uye iwe unofanirwa kutsaurira zuva rakazara kumusika uyu weflea uye nharaunda yeLondon.
5. Paris Nhata Musika
Patinofunga nezveParis, tinobva tangofungidzira mamiriro ekunze. Special, asinganzwisisike, yekare, humambo zvese zvinouya mupfungwa naParis, uye kumusika wake unoshamisa.
Paris misika yeflea ndeimwe yemisika yemhando yepamusoro muEurope nekuda kwepfuma isingawanzo yakavanda. African art, mazambiringa ekushongedza zvidimbu, uye zvipfeko zvinongova zvishoma zvezvinhu iwe zvaunowana mune ino hombe flea musika.
Kana iwe uchida kuuya nechidimbu cheParis newe, ipapo musika wePlea ndiyo nzvimbo yekutenga. Iwe unotanga kuda kwako pa Rue des Rosiers, mugwagwa mukuru, uye famba pasi kuti upinde mumisika yakatsaurwa.
Sei ikoko? Tora metro, musoro kuPorte de Clignancourt paLine 4, uye uteedzere mapoka evanhu akananga kukongiri hombe yekongiri.
6. Brussels Bhora Game Musika
Musika chete unovhurika 365 mazuva pagore, iyo Bhora Game musika muBrussels, iriwo hombe muBelgium.
Mumwoyo wedunhu reMarolles, iwe unowana zvinyorwa zvevintage, uye mabhuku asingawanzo kuradzikwa mumagumbeze. Mumigwagwa iri pedyo, iwe uchawana zvitoro zvechipiri-zvekare uye zvekare.
apo? Nguva yakanakisa yekuenda pakutsvaga hupfumi iri China neChishanu.
Kupi? Nzvimbo du Jeu de Balle Brussels
Luxembourg kuBrussels Chitima Mitengo
Antwerp kuenda kuBrussels Chitima Mitengo
Amsterdam kuenda kuBrussels Chitima Mitengo
Paris kuenda kuBrussels Chitima Mitengo
Kune misika yakati wandei muMilan, uye izvo hazvishamise sezvo iri fashoni capital yenyika. Iyo Mercatone dell'Antiquariato ndiyo misika mikuru yekuflea muMilan uye inoitika paSvondo yekupedzisira yemwedzi wega wega. Kuchavapo 380 masitendi easiti fenicha uye zvipfeko zvevintage, ndakakumirira.
zvisinei, musika wekukwirisa kwazvo muMilan ndiEast Market. Kana iwe uchitsvaga zvidimbu zvinounganidzwa kana hunyanzvi hwazvino saka iwe unozodanana neiyo East flea musika. kunze, unogona kutora masikati kana doro pane iyo DJ set, paunenge uchidzungaira pamusika unotonhorera. Kana ukangopindira, hauzodi kumbosiya izvi retro & vintage pati.
Kupi? Via Mecenate, 84
apo? Svondo yega yega
Ungasvika sei kuEast Market muMilan? Tora iyo M2 metro mutsara
Europe ndeye inosanganisa fusion ye retro uye yemazuva ano, dzinouya kuzogara mumisika inoshamisa kwazvo. Rwendo rwekuEurope haruzove rwakakwana pasina kupedza zuva mune imwe yeakanakisa 7 misika yematare muEurope. Uyezve, kudzokera kumba ndisina kana 1 chidimbu chevintage chakaita sekuti hauna kumbobvira washanyira Europe zvachose.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga rwendo rwako kune idzi 7 misika yakanyanya kunaka muEurope chitima.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "7 Yakanakisa Nhata Misika MuEurope" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-flea-markets-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, iwe unowana edu anozivikanwa nzira dzechitima - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / of to / ja kana / kes uye mimwe mitauro.
aksona Wega Neworleanmarket Europeshopping fleamarket kunotenga Train Travel